Darpan Nepal – फिफाले सार्वजनिक गर्यो कतारमा हुने विश्वकप २०२२ को समय तालिका !
फिफाले सार्वजनिक गर्यो कतारमा हुने विश्वकप २०२२ को समय तालिका !
Jul 17, 2018Pasang TamangGames/Sports0Like
एजेन्सी । रसियामा विश्वकप २०१८ को समापन संगै कतारमा हुने २०२२ को विश्वकपको समय तालिका सार्वजनिक भएको छ। मस्कोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिफा अध्यक्ष जियान्नी इन्फान्टिनोले कतारमा हुने विश्वकपको समय तालिका सार्वजनिक गरेका हुन।
Previous Postअसारमै खर्च भयो १ खर्ब, एकैदिन २७ अर्ब खर्च गर्दा पनि विकास खर्च ७९ प्रतिशत मात्रै Next Postआज साउन महिनको १गते : भगवान् शिवजीको पुजा गरी"हरिया चुरा, पहेंलो पोते, हातमा मेहन्दी लगाईन्छ ।